" ပြိုင်ပွဲ ဝင် ကလေးတွေအတွက်ဆိုရလွယ်ပြီးပရိသတ်လိုက်ဆိုနိင်တဲ့သီချင်းတွေကို မဆိုဘူးလားလို့ မေးသူတွေကို ဒဲ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ပိုပို'' - Cele Connections
CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးရေအဆိုတော်ပိုပိုကတော့ ဂီတလောကမှာ အောင်တဲ့အမျိုးသမီးအဆိုရှင်ထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူမကိုယ်တိုင်သီချင်းတွေကို ပုံဖော်ဖန်တီးရေးစပ်ကာ ကိုယ်တိုင်သီဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်MTVတွေရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့ ပါရမီရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့အချစ်ရေးကတော့ပရိသတ်တွေကိုအလင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ “ဘာလုပ်လုပ် လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့
၁ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်လုပ်တာ လုပ်ချင်လို့လုပ်တာ
၂ အောင်မြင်ဖို့ လူကြိုက်များအောင် တမင်သက်သက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
၃. လုပ်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်သွားတာ လူတွေကြိုက်သွားတာ( မအောင်မြင်ခဲ့လဲကိုယ်လုပ်ချင်လို့လုပ်တာ နောင်တမရ)
၄. နေချင်သလို စိတ်ထဲရှိသလို ဆက်နေသွားပါမည် ။( ဥပမာ မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်ရင် လူတွေ ပိုကြိုက်မှာပါ တို့လှူရင် ပိုချစ်လိမ့်မယ်တို့စကားပြောချိူသာရင် ပိုကြိုက်မယ်တို့ အစုံပေါ့ )စိတ်ထဲမပါရင် မလုပ်ဘူး နောက်ပြီး
ပြိုင်ပွဲ ဝင် ကလေးတွေအတွက် ဆိုရလွယ်တဲ့ လူတော်တော်များများ လိုက်ဆိုနိင်တဲ့သီချင်းတွေ ဘာလို့ မဆိုတာလဲတို့ 🤣ကြုံလို့ interviewer တစ်ယောက်မေးဖူးတာလေးသတိရလို့ ကိုယ့် Key နဲ့ ကိုယ့် mood နဲ့ ဆိုချင်သလို ဆိုမှာပေါ့ ။
ကမ္ဘာကျော်တွေကလဲ သူတို့ကြိုက်တာသူတို့လုပ်တယ် ။အဲ့ဒါကို ပရိတ်သတ်ကကြိုက်တယ်လေ တခါတလေ လူတွေ ကြိုက်မယ်မှန်းသိတယ် ကိုယ်ကမကြိုက်လို့ မဆိုတာမျိူးပေါ့)
၅. ပျော့ပျော့အိအိ မိန်းကလေးဆန်ဆန် မကြိုက်ဘူး ဂျစ်ကန်ကန် မိန်းကလေး စိတ်ဓါတ်ပါ ( လုပ်ချင်တာ ဆက်လုပ်မှာပါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပဲနဲ့ပေါ့နော် )
🙂၆.ကိုယ်က သူများအပေါ် လွှမ်းမိုးချင်တာ ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်ပါ ညာလုပ်ပါ လွှမ်းမိုးတာမကြိုက်ဘူး( အကြံပေးတာတော့လက်ခံပါတယ်။
၇. မှန်တယ်ထင်တာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပေါ့”ဆိုကာ သူမအတွေးခံယူချက်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။
CeleConnectionsပရိသတျကွီးရအေဆိုတျောပိုပိုကတော့ ဂီတလောကမှာ အောငျတဲ့အမြိုးသမီးအဆိုရှငျထဲကတဈယောကျပါ။ သူမကိုယျတိုငျသီခငျြးတှကေို ပုံဖျောဖနျတီးရေးစပျကာ ကိုယျတိုငျသီဆိုပွီး ကိုယျတိုငျMTVတှရေိုကျကူးလရှေိ့တဲ့ ပါရမီရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့အခဈြရေးကတော့ပရိသတျတှကေိုအလငျးပွထားပွီးသားဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ာတော့ “ဘာလုပျလုပျ လုပျခဲ့လုပျခဲ့
၁ ကိုယျကွိုကျလို့ ကိုယျလုပျတာ လုပျခငျြလို့လုပျတာ
၂ အောငျမွငျဖို့ လူကွိုကျမြားအောငျ တမငျသကျသကျလုပျခဲ့တာမဟုတျဘူး။
၃. လုပျရငျးနဲ့ အောငျမွငျသှားတာ လူတှကွေိုကျသှားတာ( မအောငျမွငျခဲ့လဲကိုယျလုပျခငျြလို့လုပျတာ နောငျတမရ)
၄. နခေငျြသလို စိတျထဲရှိသလို ဆကျနသှေားပါမညျ ။( ဥပမာ မွနျမာဝတျစုံ ဝတျရငျ လူတှေ ပိုကွိုကျမှာပါ တို့လှူရငျ ပိုခဈြလိမျ့မယျတို့စကားပွောခြိူသာရငျ ပိုကွိုကျမယျတို့ အစုံပေါ့ )စိတျထဲမပါရငျ မလုပျဘူး နောကျပွီး
ပွိုငျပှဲ ဝငျ ကလေးတှအေတှကျ ဆိုရလှယျတဲ့ လူတျောတျောမြားမြား လိုကျဆိုနိငျတဲ့သီခငျြးတှေ ဘာလို့ မဆိုတာလဲတို့ 🤣ကွုံလို့ interviewer တဈယောကျမေးဖူးတာလေးသတိရလို့ ကိုယျ့ Key နဲ့ ကိုယျ့ mood နဲ့ ဆိုခငျြသလို ဆိုမှာပေါ့ ။
ကမ်ဘာကြျောတှကေလဲ သူတို့ကွိုကျတာသူတို့လုပျတယျ ။အဲ့ဒါကို ပရိတျသတျကကွိုကျတယျလေ တခါတလေ လူတှေ ကွိုကျမယျမှနျးသိတယျ ကိုယျကမကွိုကျလို့ မဆိုတာမြိူးပေါ့)
၅. ပြော့ပြော့အိအိ မိနျးကလေးဆနျဆနျ မကွိုကျဘူး ဂဈြကနျကနျ မိနျးကလေး စိတျဓါတျပါ ( လုပျခငျြတာ ဆကျလုပျမှာပါ ဘယျသူ့ကိုမှ မထိခိုကျပဲနဲ့ပေါ့နျော )
🙂၆.ကိုယျက သူမြားအပျေါ လှမျးမိုးခငျြတာ ကိုယျ့ကို ဘာလုပျပါ ညာလုပျပါ လှမျးမိုးတာမကွိုကျဘူး( အကွံပေးတာတော့လကျခံပါတယျ။
၇. မှနျတယျထငျတာ လုပျခဲ့ဖူးတယျ ကိုယျဖွဈကိုယျခံပေါ့”ဆိုကာ သူမအတှေးခံယူခကျြတှကေိုပွောပွခဲ့တာပါ။